Gurukota Rezvekushanya Vanosangana neSeychelles Kugamuchira Vaeni uye Tourism Association
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Gurukota Rezvekushanya Vanosangana neSeychelles Kugamuchira Vaeni uye Tourism Association
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Seychelles Hospitality uye Tourism Association
Gurukota rinowona nezvekunze nekushanyirwa, Sylvestre Radegonde, pamwe nemunyori mukuru wezvekushanyirwa, Mai Sherin Francis, vasangana nebhodhi reSeychelles Hospitality and Tourism Association (SHTA) kuti vazeye nyaya dziri kuitika mukukwezva kwekushanya muSeychelles, zvichikurudzira. kutengeserana kwekuzvipira kwehurumende mukubudirira kweindasitiri pamwe nekuenderera mberi kwehurumende kushanda pamwe chete neakazvimiririra.
SHTA yakawana rutsigiro kubva kuna Gurukota rinoona nezvekunze uye Tourism mukufarira chikamu uye nharaunda yakakura.
Misangano yemwedzi nemwedzi pakati pemadhipatimendi maviri ichatangazve.
Vashandi vezvekushanya kubva kumasangano akazvimirira vachakokwa kujoina komiti nyowani yezano kuti vabatsire hurumende mukugadzirisa zvinhu zvine chekuita nekushanya.
Gurukota Radegonde vakataura pakutanga kwemusangano, wakaitwa kekutanga gore rino, zvirinani, kuburikidza nepuratifomu ZOOM mukupera kwemwedzi wapfuura, kuti bazi ravo, mukati mechikonzero, rinotsigira zvikumbiro zvakaitwa neSHTA mukufarira chikamu uye hupfumi hwakazara. Kubatana pamwe nekubvunzurudza zvichawedzerwa akadaro, nekutangazve kwemisangano yemwedzi nemwedzi pakati peDhipatimendi reKushanya neShTA.
Vachipfupikisa nhengo dzebhodhi reSHTA pamusoro pekugadzirisa kuri kuitika mukati meDhipatimendi reKushanya, Gurukota Radegonde vakati kuparadzwa kwe Seychelles Tourism Bhodhi (STB) uye kubatanidzwa kwemaviri makuru epasirese emitambo yekushanyirwa aikosha kubatanidza zviwanikwa zvezvinhu zviviri izvi nekugadzira kudyidzana kunodiwa pakati pezviviri.
Chirongwa cheGurukota Radegonde chekukoka nyanzvi dzekushanyirwa kubva kumasangano akazvimirira kuti dzibatane nekomiti nyowani yezano kuti ibatsire hurumende mukugadzirisa nyaya dzine chekuita nekushanya yakagamuchirwa zvakanaka neSTA iyo yakasimbisa indasitiri yezvekushanya inosimbiswa kana zvikamu zvakazvimirira uye zveveruzhinji zvichidyidzana nekupa rubatsiro pamwe chete kuronga uye kufunga kufunga uye kuronga mhinduro kumatambudziko enyika.
Kukosha kwemari inyaya dzakakosha dzakatarisana neindasitiri uye Gurukota Radegonde vakadzokorora chirongwa chebazi rekusimudzira chiitiko chevaenzi; kuongororwa uye kuongororwa kwenzvimbo dziripo dzekufarira uye zvigadzirwa zvekugara zvichaitiswa uye mari yekupinda yenzvimbo dzinoonekera dzinoongororwa kuona kuti vashanyi vari kuwana kukosha kwemari.